Home Somali News Masuuliyiinta Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Oo Kulan La Yeeshay Ururada Caalamiga Ah Ee...
Wafdigii ka socday Ururada iyo Hay’addaha Caalamiga ah ee ku bahoobay Ururka loo yaqaanno Somali Media Support Group (SMSG) ee Taageeridda Saxaafadda Soomaalida ee Somaliland iyo Somalia ayaa saaka booqsho ku yimid xarunta wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, waxayna kulan balladhan la qaateen masuuliinta wasaaradda. Wafdigaasi oo ka koobnaa ilaa 17 waxa ugu horraantii ku soo dhaweeyey wasaaradda wasiirka warfaafinta Mudane Cadillaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo wasiir-ku-xigeenka wasaaradda Marwo Shukri Xariir Ismail. Waxayna ugu xogwarrameen gaar ahaan ahmiyadda iyo kaalinta wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta iyo guud ahaan saxaafadda Somaliland. Waxayna warbixin ka siiyeen siyasadda dawladda ee xagga warbaahinta iyo mashaariicda horumarinta Saxaafadda, abaabulka sharciyada iyo anshxa saxaafadda, baahida hrorumarinta saxaafadda iyo tababarrada suxufiyiinta Somaliland.
Wafdigaasi Caalamiga oo uu hoggaaminayey Jaco Du Toit oo ka tirsan Hay’adda UNESCO isla markaana madaxweyne ka ah Ururka ay ku bahoobeen hay’addaha Caalamiga ah ee saxaafadda caawiye ee SMSG waxa kale oo la socdey xubno ka tirsan ururrada UN iyo EU xafiisyadooda qaabilsan Soliland iyo Somalia, iyo Ururka ccaalamiga ah ee taakulanta saxaafadda ee loo yaqaan IMS, Ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee CPJ, heyadda INterpeace, Heyadda UNDP, UNSOM, iyo khubaro xagga saxaafadda oo ka socda UK.
Xubnaha SMSG oo iyana ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay u socdaan xog-baadh ku saabsan baahida saxaafadda Somaliland iyo dhinacyada ay ka caawin karaan, waxayna intaasi ku dareen inay ku faraxsan yihiin rajaynayaanna inay wada-shaqayn iyo xidhiidh joogto ah la yeeshaan wasaaradda warfaafinta, heyadaha iyo ururada saxaafadda iyo guud ahaan suxufiyiinta Somaliland.
Halkan Ka DAAWO Muqaalka Kulankaas.
Yemen: Soomaali dib uga soo qaxday dalka Yemen oo Bosaso lagu soo dhaweeyey